Ilay iPod Touch 5G 16GB vaovao akaiky kokoa | Vaovao IPhone
Roa andro lasa izay dia gaga anay i Apple ny fanombohana maodely vaovao amin'ny iPod 5G. Tsy misy doka, tsy misy hetsika, tsy misy tabataba, na famerenana kely aza eo amin'ny pejy voalohany amin'ny tranokalanao, ny iPod Touch vaovao no lasa maodely fototra indrindra ao amin'ilay faritra, tsy misy afa-tsy 16GB fitehirizana anatiny ary tsy misy fakan-tsary iSight. Ny fakan-tsary 5Mpx aoriana dia tsy misy ao amin'ity maodely vaovao ity, izay miaraka amina vidiny € 249 dia mety ho azontsika manomboka izao, mividy azy ao amin'ny magazanao an-tserasera amin'ny vidiny fandefasana maimaim-poana na any amin'ny magazay Apple izay efa ahatongavany. Ny iray amin'ireo mpividy voalohany dia nanao horonantsary mampiseho ny antsipirian'ny fitaovana Apple vaovao.
Ny zavatra miavaka voalohany dia izay misy amina loko mitambatra izay tsy azo tanterahina miaraka amin'ireo maodely ambonimbony kokoa: mainty sy volafotsy. Tsy toy ny maodely 32 sy 64GB, tsy misy loko intsony. Any aoriana, ny tsy fisian'ny fakantsary iSight dia manaitra, ary izy io koa dia tsy manana ny masom-by ho an'ny tadiny izay amidin'i Apple ho an'ny modely hafa ary mamela azy hamatotra azy.
Ny ambin'ny famaritana dia mitovy amin'ny an'ny maodely hafa, ary koa ny fisehoana sy ny famaranana, amin'ny haavon'ny vokatra Apple rehetra.
¿Manonitra ny fahasamihafana amin'ny vidiny amin'ireo tombony ambany? Eny, hiankina amin'ny fampiasana tadiavin'ny tsirairay omena azy io. Ny ankamaroany angamba dia mieritreritra fa aleon'izy ireo manana iPod Touch miaraka amina fakan-tsary ary manana tahiry fitahirizana bebe kokoa, saingy azo antoka fa maro ny mpividy izay mampiasa fampiasa fototra kokoa ny fitaovana no hankasitraka ny € 70 izay azo vonjy rehefa mividy an'ity modely vaovao ity. Ny maodely 4G teo aloha dia tsy azo vidiana intsony ao amin'ny magazay an-tserasera Apple, ka raha te hahazo iray ianao dia tokony hikoropaka hitady izany any amin'ireo fivarotana hafa izay mbola ananan'izy ireo tahiry. Raha te-hahita ilay horonan-tsary feno ianao dia azonao ampiasaina.
Fanazavana fanampiny - Apple mandefa iPod Touch 16GB tsy misy fakantsary iSight
Loharano - MacRumors
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny iPod Touch 5G 16GB vaovao akaiky kokoa
August Smart Lock manokatra ny varavaran'ny tranonao